Taa ka a na-achụ afọ. Taa bụ abalị mbụ nke ọnwa jenụwarị ka a na-achụ afọ n’ebe dị iche iche. E jiri ọkpụkpa ọkụ nọkaụtụ mara ịchụ afọ.
O wete aka n’elekere 12 nke abalị, a na-amụnye ọkụ nọkaụtụ na mpaghara ụwa dị iche iche maka ịchụ afọ. Ndị mmadụ na-agbakọọ maka ilekiri ọkpụkpa ọkụ a.
Obodo ọbụna nwere omenaala ha na-eme, ha ji ajụ afọ. Ọtụtụ mmadụ na-aga n’ụlọ ụka kpegide ekpere were nabata afọ ọhụrụ.
Anyị hụtara omenaala ndị Amerịka n’isi ụtụtụ taa na New York. Ka ọ na-ewete aka n’elekere 12 nke ime abalị, a tụdara oke bọọlụ Confetti. Ndị mmadụ malitere gụdawa nkeji, ruo mgbe ọ kụrụ elekere 12 kpọmkwem. Mgbe ahụ ka afọ 2013 malitere na New York.
Anyị bụ ndị Igbo Radio na-ekele Chineke maka ndụ na ike o nyere anyị iji na-akọrọ ụmụ Igbo bi ebe dị iche iche ihe na-eme n’ụwa n’asụsụ Igbo.
Asụsụ mba dịkwara mba. Asụsụ ndị Igbo dịkwara ndị Igbo n’afọ 2013. Chineke ekwekwana ka e megbuo anyị ma ọ bụ napụ anyị asụsụ anyị. Amen.